ससफो प्रदेश १ को समितिमा को को निर्वाचित भए ? - Sainokhabar
होमपेज / राजनीति / ससफो प्रदेश १ को समितिमा को को निर्वाचित भए ?
ससफो प्रदेश १ को समितिमा को को निर्वाचित भए ?
बिहिबार, बैशाख १९, २०७६ , साइनो खबर
विराटनगर । संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) नेपालको प्रदेश १ को अध्यक्षमा युवा नेता प्रविण चाम्लिङ निर्वाचित भएका छन् ।
विहीबार विहान सम्पन्न प्रथम एकताको प्रदेश अधिवेशनबाट चाम्लिङ अध्यक्षमा निर्वा्चित भएका हुन् । निकटतम प्रतिष्पर्धी भुराज राईलाई १३ मत अन्तरले पराजित गर्दै चाम्लिङ विजयी भएका हुन् । घोषित मत परिणाम अनुसार ४ सय ७ मत खसेका मध्ये चाम्लिङले २ सय ६ मत प्राप्त गरेका थिए । चाम्लिङका प्रतिस्पर्धी राईले १ सय ९३ मत मात्र पाएका थिए । निर्वा्चित चाम्लिङ राजनीति समिति सदस्य तथा राई केन्द्रीय सदस्य हुन् । चाम्लिङ गत असोज ९ र १० गते विराटनगरमा भएको पार्टीको प्रथम भेलामा तदर्थ समितिको अध्यक्ष अर्का केन्द्रीय सदस्य भुपेन्द्र नेम्बाङसँग पराजित भएका थिए । अध्यक्षका तीन आकाङ्क्षीमध्ये प्रदेश तदर्थ समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्र नेम्बाङले अन्तिममा भूराज राईलाई समर्थन गरेका थिए । नेतृत्वका लागि चाम्लिङ र राई बीच कडा स्पर्धा हुने अड्कल काटदै आएको थियो । ससफोको विधान अनुसार अध्यक्ष र सदस्य पदमा मात्र निर्वाचत गर्ने व्यवस्था छ । बैठकले सदस्यहरुबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचित सदस्यहरुमा खुल्लातर्फबाट केबलमान राई, नवीन राई, धिरेन लावती, लोकसागर सावाँ, महेश रानामगर विजयी भएका छन् । महिला सदस्यहरुमा कुन्ता राई, मातृका राई र शान्ता मोक्तान विजयी भएकी छन् । भूगोलतर्फबाट मोरङबाट राजकुमार यादव, दुर्गामणि सुवेदी, प्रेम वनेम, विशाल आङदम्बे, उषा यादव र अञ्जली साह, झापाबाट उमेश थापा, पदमकुमारी राई, गौरीमान राई, कमन देवान, शर्मिला आङदेम्बे, ईलामबाट लिलाबहादुर सुनुवार, बिनोद नेम्वाङ र मोहन देवान, सुनसरीबाट दिपेश राई, दिपक बिश्वास, सबिता यादव, सरोज बस्नेत (पर्शुराम) तथा सोलुखुम्बुबाट आसा राई र भक्तबहादुर राई विजयी भएका छन् । चाम्लिङ र राई पक्षका मिश्रित रुपमा नै मतपरिणाम आएको छ ।
बैशाख १५ र १६ गते हुने भनिएको ससफो प्रथम राष्ट्रिय एकता अधिबेशन लम्बिएको थियो । अधिबेशनमा अध्यक्षसहित ५१ पदमध्ये ३१ पदका लागि दुई समूह बनाएर ६७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । २० सदस्यहरु सर्वसम्मत भएपछि यसअघि नै विजेता बनिसकेका थिए । अधिवेशनमा १४ वटा जिल्लाका करिब ५ सय प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । अधिबेशनकोे उद्घाटन पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले गरेका थिए ।
यस्तो छ वरियाक्रम
पदाधिकारी चयन नभए सम्म सदस्यहरुको बरियादा क्रम वणानुक्रमअनुसार रहने नव निर्वाचित सदस्य कमन देवानले बताएका छन् । नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार अध्यक्ष – प्रवीण चाम्लिङ सदस्यहरु – अञ्जली साहा आशकुमार राई आशा राई उपेन्द्र लावती उमेश थापा उषा यादव एबीराज आङ्देम्बे कमन देवान कुन्ता राई केदार धिमाल केवलराम राई कृष्णबहादुर कट्वाल गौरीमान राई घनश्याम कटवाल चन्द्र मादेन तेजमाया दुमी राई दिपक याक्खा दिपेश राई दुगामणि सुवेदी दिपक विश्वास थारु धिरेन लावती धिरेन्द्र रुम्दाली नवीन राई पदमकुमारी राई प्रेम वनेम बलबहादुर राई बिनोद नेम्वाङ बिशाल आङ्देम्बे भक्तबहादुर राई भरत याक्खा महेशकुमार रानामगर मात्रिका राई मीना राई मोति पालुङ्वा राजकुमार यादव राजेशकुमार इङ्वा रीता राई लासाङ तामाङ लिलाबहादुर सुनुवार लोकबहादुर सिंघक लोकसागर साम्बा सनबहादुर राई सम्सतवरेज आलम सरोज बस्नेत सविता यादव शान्ता तामाङ शर्मिला आङ्देम्बे श्याममाया राई हस्तशोभा राई ज्ञानकुमार परियार बताइएको छ ।
७.मुखबाट छिरेको ब्रसलाई निकाल्न सफल नोबेल अस्पताल